အိပ်မက်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘ၀ ဇာတ်ဆရာရဲ့
21 June 2012 at 01:46
When it comes to sad incidence even in the dream, I usually cry and sob while waking up. I simply wish all the best for the girl who does not want to wander off in the dream anymore.
အေးဟ ဂျာရစ်...ညည်းပြောတော့လဲ ဟုတ်တုတ်တုတ်ရယ်...။
21 June 2012 at 03:22
အချစ်ဆိုတာ အလျားအနံမရှိပေမယ့် အသွားအပြန်တော့
အသက်ကလေးရလာတော့ အချစ်မှ မဟုတ်ဘူးဗျိုး.....
jas လဲမိုးငွေ့နဲ့ အတူ
" ညတိုင်းအိပ်မက်ထဲမှာ တစ်စုံတယောက်ငါ့ကိုရပ်စောင့်နေတယ်"
" ညတိုင်းအိပ်မက်ထဲမှာ တစုံတယောက်င့ါကိုရပ်စောင့်နေတယ် "တဲ့
♫ ♫ ♫ တစုံတရာရယ် ကြယ်တွေကြွေအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတယ် ....... ♪ ♪ ♪
အချစ်ဆိုတာ အသွားအပြန်ရှိမရှိ မသိပေမယ့်
မေတ္တာကတော့ အသွားအပြန်ရှိတယ်နော် မ :D
ကော်ဖီရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ရင်ထဲက သံစဉ်လေး.. တိတ်တဆိတ်ထွက်ကျလာတာ စိုစွတ်နေပါရောလားး..